अण्डाको मूल्य बढ्यो, लागत मूल्य अझै पुगेन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ अण्डाको मूल्य बढ्यो, लागत मूल्य अझै पुगेन
on: July 09, 2019 प्रदेश ०३, प्रदेश समाचार
असार २४, चितवन । कुखुराको अण्डाको मूल्यमा सुधार आएको छ । लागत मूल्य भने कृषकले अझै पाउन सकेका छैनन् । प्रतिक्रेट रू.२०० मा विक्री हुँदै आएको ठूलो अण्डाको मूल्य रू. २८० पुगेको छ । सानो अण्डाको मूल्य रू.११५ बाट बढेर रू. २३० पुगेको छ ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार कृषकको लागत मूल्य प्रतिगोटा रू. १० पर्दछ । बढेको विक्रीमूल्य समग्रमा प्रतिगोटा रू.८ र ५० पैसा पर्दछ । हाल दैनिक ४० लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गर्दछ । यो संख्या ५५ लाख पुगेकोमा क्रमशः घट्दै आएको कँडेलको भनाइ छ । अण्डाको मूल्य कम भएपछि धेरैले माउ कुखुरा विक्री गरेका छन् ।
यससँगै चर्को गर्मीका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ । पछिल्लो समय कृषकले चल्ला राख्नसमेत छाडेका थिए । यसबाट अण्डा उत्पादनमा क्रमशः गिरावट हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । संघका केन्द्रीय सचिव मदन पोखरेलले अण्डाको मागअनुसार आपूर्ति हुन कठिन भएकाले क्रमशः मूल्यवृद्धि हुँदै जाने अनुमान गरिएको बताए ।
तीन वर्षअघि अण्डाको मूल्य बढेर प्रतिक्रेट रू. ३६० पुगेको थियो । गत एक वर्षयता भने खर्च नधान्ने गरी मूल्यमा गिरावट आएको कृषकको भनाइ छ । पोख्रेलका अनुसार नेपालमा ७ हजार कृषकले कुखुरा पाल्ने गरेको तथ्यांक छ । जहाँ १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
लेयर्स कुखुरामा मात्र रू.१ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको पोखरेलको भनाइ छ । दानाको मूल्य र बैंकको ब्याज बढ्दै जाने र अण्डाको मूल्य घट्दै जाँदा व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकोमा क्रमशः मूल्यवृद्धि हुन सकेमा टिक्नसक्ने उनले बताए । रासस
अण्डाको मूल्य बढ्दा कृषकलाई राहत, नयाँ मूल्य निर्धारण
लागतअनुसारको मूल्य नपाएपछि अण्डा उत्पादक किसान आन्दोलित